10 “Kumbirai Jehovha kuti akunayisirei mvura+ munguva yemvura yokupedzisira,+ iye Jehovha anoita makore anounza dutu,+ anonayisa mvura zhinji pavari,+ anopa mumwe nomumwe zvinomera mumunda.+ 2 Nokuti terafimu+ dzakataura zvemashiripiti; uye vanoshopera vakaona zvinhu zvenhema,+ vanoramba vachitaura hope dzisina zvadzinobatsira, uye vanoedza kunyaradza pasina.+ Ndokusaka vachaenda sezvinoita makwai;+ vachatambudzwa, nokuti hapana mufudzi.+ 3 “Ndakatsamwira vafudzi kwazvo,+ uye ndichaita kuti vatungamiriri vakaita sembudzi+ vazvidavirire;+ nokuti Jehovha wemauto afunga nezveboka rake rezvipfuwo,+ iyo imba yaJudha, uye aita kuti vave sebhiza+ rake rokukudzwa riri muhondo. 4 Mutungamiriri+ achabva kwaari, mutongi anotsigira achabva kwaari,+ uta hwehondo huchabva kwaari;+ vakuru vose vebasa vachabva kwaari,+ vose zvavo. 5 Vachava sevarume vane simba+ vanotsika-tsika mumatope omumugwagwa muhondo.+ Vacharwa, nokuti Jehovha anavo;+ vanotasva mabhiza vachanyara.+ 6 Ndichaita kuti imba yaJudha ive huru, uye ndichaponesa imba yaJosefa.+ Ndichavapa pokugara, nokuti ndichavanzwira ngoni;+ uye vachava sevaya vandakanga ndisina kurasa;+ nokuti ndini Jehovha Mwari wavo, uye ndichavapindura.+ 7 Vaya vaEfremu vachava somurume ane simba,+ uye mwoyo yavo ichafara sokunge iri kufadzwa newaini.+ Vanakomana vavo vachazviona vofara;+ mwoyo yavo ichafarira Jehovha.+ 8 “‘Ndichavaridzira muridzo+ ndovaunganidza; nokuti ndichavadzikinura,+ uye vachava vazhinji, sevaya vaiva vazhinji.+ 9 Ndichavamwaya pakati pemamwe marudzi sezvinoitwa mbeu,+ uye vachandiyeuka vari kunzvimbo dziri kure;+ vachamuka pamwe chete nevanakomana vavo, vodzoka.+ 10 Ndichavadzosa kubva kunyika yeIjipiti;+ ndichavaunganidza+ vachibva kuAsiriya; uye ndichavaendesa kunyika yeGiriyedhi+ neRebhanoni, uye havazowanirwi nzvimbo.+ 11 Ndichapfuura nomugungwa ndichiritambudza;+ uye ndicharova mafungu mugungwa,+ uye nzvimbo dzose dzakadzika dzaNire dzichaoma.+ Kudada kweAsiriya kuchaderedzwa,+ tsvimbo+ youmambo yeIjipiti ichabva.+ 12 Ndichaita kuti vave vakuru muna Jehovha,+ uye vachafamba+ nezita rake,’ ndizvo zvinotaura Jehovha.”